travelberlin Archives | Save A tareenka
Top Day qiimeeyo Safaro Qaado From Berlin waxaa waajib ah inkastoo Berlin laftiisa isagoo meel fantastic inay soo booqdaan! Waxaa jira jiidashada weyn oo ku filan in caasimada Germany in ay sii aad degan maalmo. Si kastaba ha ahaatee, maalin safarada ka Berlin in magaalooyinka deriska ah iyo baadiyaha…
farshaxanka Street waa nooc casriga ah ee ra'yi dhiibashada farshaxanka dhigaya magaalooyinka dheeraad ah oo qurux badan. A kabarta jidka wanaagsan sidoo kale loo Waxyoodo ahayn laga yaabaa in aad ka fekerto maaddo bulsho muhiim ah ama idin xusuusiyo shuqullada sayid classical. Magaalooyinka Yurub waxaa ka buuxa…
blog ku saabsan meelaha waa in ay u dabaal in style New Year ee safarka tareenka si aad magaalada ugu cadcad Yurub ah fasax aan la ilaawi karin xilliga qaboobaha. Haddii aad raadinayso habeen jaceyl dhaqanka, rashka bandhigay cajiib ama xisbiga ee sannadka, anaga…